Ndi Agha ụgbọelu tụrụ ogbunigwe n’obodo nta dịgasị n’Adamawa: Otu Amnesty – hoo!haa!!
Ndi Agha ụgbọelu tụrụ ogbunigwe n’obodo nta dịgasị n’Adamawa: Otu Amnesty
Okpokoro ụgbọelu ogbunigwe gbatara.
Ndi agha ụgbọelu Naịjiriya gburu opekata mpe ya bụrụ madụ iri atọ n’ise mgbe ha tụpụrụ ogbunigwe n’obodo nta dịgasị n’Adamawa Steeti n’ọnwa Disemba gara aga, ọ bụ otu Amnesty International kwuru nkea n’ozi ha wepụtara ụnyahụ.
Ọnụ na-ekwuru ndi agha ụgbọelu bụ Olatokunbo Adesanya gọrọ agọ sị na ndi agha ụgbọelu enweghị mgbe ha tụrụ ndi mmadụ ogbunigwe kama na ha kwawara mgbọ iji were chụsasị ndi na-ebute ọgbaghara. Ọ sịkwa na ha amaghị banyere onye ọbụla nwụrụ oge ahụ.
Ndi obodo nta ahụ kọrọ etu ụgbọelu eji eje ọgụ jiri kwakwasịwaha mgbọ ka ha na-agba ọsọ ndụ ka ndi Fulani na-achị ehi nọ na-achụ ha, Amnesty kwuru.
N’abalị anọ nke ọnwa Disemba, ụgbọelu eji eje ọgụ tụwara ogbunigwe n’obodo nta dị iche iche iji gbochie ibu agha nakwa ịbọ ọbọ na-arị ibe ya elu na steeti ahụ.
Otu onye ọrụ ugbo kwuru sị“ ụgbọelu ndi a eji eje ọgụ malitere tụpụwa ogbunigwe. Ụlọ ndi mmadụ gbawara ọkụ, Ụmụaka na-eti mkpụ na-agbakwa ọsọ ndụ ha”
The helicopter and the jet started releasing bombs. Houses started burning. Children started running for their lives,” an unnamed farmer from the village of Shafaron told Amnesty.Ụgbọala nakwa ụlọ ndi ọkụ gbapịara ka e gosiri na onyonyoo nke ndi Amnesty ji. Onyonyoo satalaịtị gosikwara ọtụtụ ebe ndi mmadụ bi ọkụ ogbunigwe gbapịara agbapịa.
Atụrụ ogbunigwe na Lawaru, Dong, Kodomti, Shafaron nakwa Nzuruwei,ebe otu Amnesty International gbara ihe ruru madụ iri n’ise ajụjụ ọnụ. Ha nyekwara ndi Amnesty aha ndi nwụrụ anwụ ndi ruru madụ iri asatọ n’isii.
Previous Post: NWATA/NWA
Next Post: NNE